Zuma lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
tao amin'ny birao, ao an-trano, ary nanorim-ponenana teo amin'ny takelaka lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Zuma. Rehefa nanomboka ny hilalao, dia efa tsy ho vita ny manapaka. Kilalao tightens, liana. Bibilava ny baolina ny samy hafa loko biby mandady na mikisaka an-lavaka, ary mitifitra azy avy ny tafondro, maka ireo baolina ho an'ny nitifitra ny manaraka izay mifanandrify ny loko ny vondrona iray ao amin'ny rojo. Tsara vintana nitifitra manimba ny vondrona, ary raha namely ny – dia ho lasa anisan'ny ny menarana, ary ny fanolorana azy io akaiky kokoa ny lasibatra. Fa na inona na inona, tsy ho ela dia hanana ny Bonus baolina.
ny tokony hatao rehefa nisy antsasaky ny ora maimaim-poana? Tena tsy manam-potoana hamitana ny lalao, fa hilalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Lalao Zuma ho avy amin'ny mora raisina. Toy na multi-sehatra, fa amin'ny fotoana rehetra dia mety ho tapaka mba hiverina indray any amin'ny zava-nitranga tatỳ aoriana. Izy no fototry ny fandringanana ny vondrona ny baolina miloko ihany-mihetsiketsika eny ny miolakolaka nilahatra bibilava, ary miezaka hanatratra ny trano. Tsy maintsy mijanona izany, ary rehefa mitifitra basy ka hivadika ny vondrona, dia nanapaka ny rojo, ary manosika azy indray. Mifantoka amin'ny loko ny iray cannonball sy mampiasa ny fanampiana ny Bonus baolina.
Totemia: Mofo madinika
Zuma ny valifaty
Lost Island ambaratonga entana
2 baolina anaty rano
The Twilight Eternal
Ny Magic of Love
Jelly Manafika BeachLine
Miaro ireo mpikirakira
Fiarovana amin'ny Shooter Monster
Fiarovana atody Dino
Misiona Marbel Snow
Nosy Very 3
Lalao Zuma tamin'ny Category:
Farany Zuma lalao
Lalao Online Rehetra Zuma lalao an-tserasera
Ny tena mahafinaritra ny lalao Zuma
Ny izao tontolo izao ny tsotsotra – tsotra lalao lehibe fa Izy dia mahatahiry ilay gaga izay rehetra Misarika ny saina aza indraindray ny lalao video. Ny dingana tsy mitaky fahaizana manokana na manokana, ary izy ireo matetika no hita amin'ny aterineto. Anisan'ny karazany misy faritra samihafa:
ny lalao lojika,
Raha ny sasany dia natao manokana ho an'ny ankizy, fa ny hafa kosa dia rehetra ary milalao ao aminy ny olon-dehibe amin'ny tena filan'ny nofo. Atolotsika-tserasera hilalao Zuma sy tsy miankina manamarina izany. Zavatra tsy sokajy isan-karazany ny safidy ho an'ny voly ary raha tianao ny culinary foto-kevitra, handeha any amin'ny trano fisakafoanana hazandrano. Miezaha foana sakafo amin'ny fehin-kibo ny milina fitotoana tsy tonga ny sisiny, raha tsy izany dia ho latsaka amin'ny tany, ary ny lalao mifarana. Raha ny marina, isaky ny milalao Zuma maimaim-poana amin'ny aterineto, izany fitsipika izany dia ho foana. Ao amin'ny klasika dikan-ny vokatry fa tsy ny kasety teo amin'ny kianja filalaovana mampihetsi-po bibilava ny miloko baolina. Miadana izy mandady avy ny lavany, ary mahatonga tao an-trano eo afovoan'ny an-tsaha sy ny manana basy izay nitifitra ny baolina ihany. Alohan'ny ny tifitra ianao dia afaka mahita ny fomba baolina dia manidina avy ao amin'ny barika, ary jereo ny fijery mitovy eo amin'ny tena ny menarana. Mifantoha haingana, raha tsy izany no nitranga ny sehatra, ary dia mamerina. Raha ny loko mba hitifitra ny baolina mitovy ny ao amin 'ny menarana, mitifitra azy ary rehefa hanangonany vondrona telo mitovy zavatra, dia manjavona, sy hanenjanana kokoa ny vatana ny biby mandady ary miverina.
Ny fomba tsotra indrindra haka tanjona, raha ny hetsika eo amin'ny voalohany, faribolana lehibe, fa ho toy ny lalana miolakolaka, dia tonga ny fotoana fidirana ho amin'ny ankavanana, manarona ny vaovao baolina coils ny menarana. Samy lasa teritery kokoa Ary complicates ny dingana ny fandringanana, ka zava-dehibe ny hametraka scoring punches ao am-piandohana ny sehatra.
Raha eo amin'ny tantara miangona ampy hevitra, azonao iray amin'ireo tombontsoa, ​​ary samy nahazo ny Bonus mitondra fahafahana vaovao. Ankehitriny dia afaka tanjona ho nitifitra vaovao mampiasa tamin'ny laser tondron'ny totozy – Amin'ity tranga ity dia sarotra ny hanadino ny zavatra voafantina. Misy baolina nipoaka sy handrava kokoa ny baolina ny misy loko. More zavatra maro ary tafiditra tao an-rafitra baolina samy hafa tanteraka, dia ny nandravany azy. Koa misy fa ny miadana toy hetsika ny menarana, mamela anao hiatrika izany tsara. Fa misy ihany koa ny sazy avy amin'izany, ohatra, ny andiam-nahomby hetsika fifamoivoizana bibilava mandady lasa haingana kokoa, ianao dia tsy amin'ny tanana. Raha tampoka ianao vonona ny afo tanteraka ny baolina tsy ilaina, izany hoe ny tanimbary dia tsy mitovy loko izany, Mitifitra na inona na inona mba ho amin'ny manaraka indray mahasoa kokoa.
embodiments lalao isan-karazany
Ao amin'ny aterineto Zuma milalao tena mahaliana. Rehetra lalao – izany no lohahevitra vaovao, saingy foana ny firework ny mazava loko sy ny hira mahafinaritra. Efa lasa zatra ny zava-misy fa rehefa mandeha ny fotoana misy vokatra ao amin'ny lehibe tany am-boalohany ihany no mitovy lalao. Noho izany, dia tsy ho gaga fa afaka milalao an-tserasera Zuma amin'ny fomba hafa. Ohatra, ny baolina tsy miolakolaka mihazakazaka eo amin'ny tany, ka dia hifantoka foibe anankiray, ary isaky ny crank voatifitra sy hiverina eny am-pita. Rehefa namorona sampahom-baolina maro samy hafa loko avy any amin'ny foibe axis, ireo, ka toy ny mihodinkodina mpankafy, nefa mbola tsy maintsy hitifitra teo ihany ny tena vondrona voatifitra.
safidy iray hafa, rehefa milalao ny lalao maimaim-poana Zuma tolotra, nanimba zavatra izay efa voangony teo an-tampon'ny faritra ny milalao. Vane izy, nefa tsy ho mora kokoa ny dingana. Raha handeha smear izany nahavoa ny lasibatra, ela tsy misy intsony toerana, mba hahatonga, ary midika ho fatiantoka.
Ny lalao dia tena mitovy amin'ny Zuma Puzzle genre & laquo, telo misesy », fa ny fitsipika dia ampiharina amin'ny kokoa mavitrika. Ao amin'ny poti-Zuma any foana mihetsika, sliding nidina ho any amin'ny afovoan-lamba, na mifindra any amin'ny lalana mankany amin'ny zavatra rehetra. Poti tsy azo swapped, fa ianao dia afaka mampitombo tifitra mba hameno azy ireo amin'ny alalan'ny famoronana karazana telo na mihoatra mitovy tarehimarika – ireo vondrona ireo manjavona avy amin'ny efijery. Olana – mba tsy mifindra ny poti-ho any amin'ny tsipika fahatongavana.
Ao amin'ny Zuma, toy ny ankamaroan'ny lalao toy izany, ny poti-dia atao amin'ny endrika miloko baolina, Fa misy ny sasany tsy mahazatra dikan piozila ity. Ohatra, tao amin'ny saha bibikely sasany nandady sy ny hala Niantoraka azy ny hafa, ka ny daharana ny bibikely ny mitovy loko mba hanala azy ireo amin'ny lalana, fa tsy aoka ny hanimba zavatra ny fijinjana vokatra. Misy lalao izay ny saka efa voafehiny ny fahaiza-hypnosis sy fitaomam-panahy ny akoho fa tsy maintsy nitsambikina tao an-vavany. Akoho iray ihany no afa-nandositra ny mahatahotra zava-poana, ary ankehitriny amin'ny slingshot mitifitra ny mpiara-miloko zana-borona tsipika mba hisorohana ny mpamono olona saka sest ny niharam-boina.
Fenoy asa rehetra, milalao lalao Zuma
Ao amin'ny Zuma Deluxe milalao an-tserasera maimaim-poana amin'ny fisafidiana ny iray amin'ireo fomba roa. Ao amin'ny voalohany nanolo-kevitra ny sasany fihodinana – misy mila mandritra ny fotoana voafetra mba hamita iray manokana ambaratonga, ny tahan'ny izay mitombo avy amin'ny vondrona tsirairay ny tarehimarika rava. Ao amin'ny fomba hafa, ny lalao mitohy mandra-Avy eo, mandra-pahatongan'ny fahadisoana natao, ary ny rojo vy tonga ny faran'ny lalana. Izany dia mamela firaketana an-tsoratra lehibe ho an'ny scoring. Fitondrana toy izany dia hita ao amin'ny lalao hafa mitovy gameplay, fa ny fisarahana an-fihodinana azo ampiharina eto fomba hafa – ohatra, ny haavon'ny ny lalao dia nandresy rehefa nisy famantarana maro rava.
Mba soa aman-tsara milalao Zuma-tserasera, dia afaka mampiasa ny sasany Bonus zavatra izay miseho eo amin'ny olo-malaza hafa. Hampavitrika ny Bonus, dia tsy maintsy ahitana izany ao amin'ny vondrona nikasa ny hanafoanana azy io. Noho izany, dia afaka hitsoka ny poti-tany iray manodidina ny – matetika toy izany no asehon'ny Bonus baomba. Na mifindra ny rojo manontolo ho tsy lavitra avy any amin'ny faran'ny lalana – izany no atao amin'ilay Chip zana-tsipìka. Hanemotra gadra, nampiasa ny Bonus ny fiambenana. Milalao ao Zuma, dia afaka mampiasa tetikady hetsika izay manampy antsika hiaro manohitra very. Ohatra, raha hamono ny vondrona ao amin'ny afovoan-rojo, dia hisy ny tsy fahombiazana, ary ny anoloana afaka iverenana ny poti ny lasa, mifindra hiala amin'ny tsipika fahatongavana. Matetika, na izany aza, mitaky izany fa ny sisin'ny ny tapaka gadra ny mitovy loko. Hanatsarana ny fahaiza-manao amin'ny mpiara-manompo mavitrika Puzzles Zuma-tserasera sy ny hafa-boly toy izany koa eo amin'ny toerana!